Uhlelo lweFirmware - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ubunjiniyela beFumax buzolayisha i-Firmware yekhasimende (imvamisa i-HEX noma i-BIN FILE) ku-MCU ukuze imikhiqizo isebenze.
I-Fumax inokulawula okuqinile ezinhlelweni ze-firmware
Izinhlelo ze-IC ukubhala lolu hlelo esikhaleni sangaphakathi se-chip ngokusebenzisa ithuluzi lokuhlela, ngokuvamile elehlukaniswe ngohlelo olungaxhunyiwe ku-inthanethi nakuhlelo lwe-inthanethi.
1. Ngokuyinhloko izindlela zokuhlela
(1) Umdidiyeli wohlelo jikelele
(2) Uhlelo olunikezelwe
(3) Izinhlelo eziku-inthanethi:
2. Izici zohlelo oluku-inthanethi：
(1) Izinhlelo eziku-inthanethi zisebenzisa ibhasi yokuxhumana ejwayelekile ye-chip, njenge-USB, i-SWD, i-JTAG, i-UART, njll. I-interface ivamise ukulungiswa futhi izikhonkwane ezimbalwa zixhunywe ngesikhathi sohlelo.
(2) Njengoba isivinini sokuxhumana esibonakalayo singekho phezulu, ikhebula elijwayelekile lingasetshenziselwa ukuqopha ngaphandle kokusetshenziswa kwamandla okuphezulu.
(3) Njengoba ukushiswa oku-inthanethi kuhlelwe ngoxhumano olunentambo, uma kutholakala iphutha ngesikhathi sokuhlolwa kokukhiqizwa, i-PCBA enephutha ingalandelwa iphinde ishiswe ngaphandle kokuqaqa i-chip. Lokhu akugcini nje ngokusindisa izindleko zokukhiqiza, kodwa futhi kuthuthukisa ukusebenza kahle kohlelo.
3. Yini umqambi?
I-PROGRAMMER, eyaziwa nangokuthi umbhali noma i-burner, isetshenziselwa ukuhlela i-IC ehlelekile.
4. Ubuhle bohlelo lwe-IC
Ezingxenyeni eziningi ze-IC yangaphambilini, azisetshenziswa ngokujwayelekile, kepha zisetshenziswa ngokukhethekile, kubizwa ama-ID AZINIKELELE.
Ngakho-ke uma abaklami befuna ukuklama ibhodi lesifunda, kumele basebenzise izinhlobonhlobo ze-IC ezinemisebenzi engaguquki, futhi badinga ukulungiselela izinhlobo ezahlukahlukene ze-IC, ikakhulukazi zabakhiqizi abakhulu.
Manje umklami udinga kuphela ukulungisa i-IC ukuze ayishise ibe yi-IC ngemisebenzi ehlukile ngemuva kokuthi ama-ID azinikezele asungulwe futhi asetshenziswa.
Ukulungiselela kulula, kepha okokushisa kufanele kulungiselelwe ukukushisa.
5. Amandla ethu:
Amathuluzi weSoftware: Altium (Protel), PADS, Allegro, Eagle
Uhlelo: C, C ++, VB